I-BunnyStudio: Fumana iLizwi eliPhezulu leTalente kunye nokuPhumeza iProjekthi yakho yeAudio ngokukhawuleza nangokulula | Martech Zone
Andiqinisekanga ukuba kutheni nabani na evula imakrofoni yabo yeLaptop kwaye benze umsebenzi owoyikekayo ebalisa ividiyo enobuchule okanye umkhondo weaudi yeshishini labo. Ukongeza ilizwi lobungcali kunye nengoma yesandi ayibizi, ilula kwaye italente ngaphandle iyamangalisa.
Ngelixa unokuhendeka ukuba uye kukhangela ikontraka kulo naliphi na inani lezikhombisi, BunnyStudio ijolise ngqo kwiinkampani ezifuna uncedo lobuchwephesha bomsindo ngeentengiso zazo zomsindo, ipodcasting, iitrailer zemovie, ividiyo, abasebenza kwinkqubo yefowuni, okanye ezinye iiprojekthi zomsindo. Banikezela ngokufikelela kumawakawaka abadlali bezwi abazimeleyo kwiilwimi ezininzi eziphicothiweyo ngaphambili.
Indawo ikunika ithuba lokucoca ulwelo kunye nokubuza italente abanayo yezwi, ukubhala, ividiyo, uyilo, okanye nokukhuphela. Unokukhetha ukubhukisha italente oyifumeneyo, wamkele umntu onokujika ngokukhawuleza kwiprojekthi, okanye usebenze ukhuphiswano phakathi kweetalente zokuthetha ngelizwi ukuze uzikhethele ophumeleleyo! Khetha nje inkonzo, ulwimi, kunye nenani lamagama kwiskripthi sakho kwaye ukulungele ukuya:
Bhrawuza ilizwi kwiisampulu -Khangela kwiziko ledatha labadlali belizwi, jonga iisampulu zabo, kwaye ukhethe eyona ilungele iprojekthi yakho.
Ngenisa iprojekthi yakho emfutshane -Thumela ulwazi ngeprojekthi yakho. Iinkcukacha ezingakumbi onokubonelela ngazo, kokukhona banokuziqonda iimfuno zakho.
Fumana ilizwi lakho elilungele ukusetyenziswa ngaphezulu -Vuma kwaye ukhuphele ukulungele ukusebenzisa, ilizwi elilawulwa ngumgangatho ngaphezulu okanye ucele uhlaziyo.
Ndikhe ndasebenzisa iqonga elidlulileyo ngomsebenzi othile (ngaphambili babesaziwa njengeLizwiBunny) kwaye babuyela namhlanje ukufumana ilizwi elitsha kwi-podcast yethu, Martech Zone udliwano. Kwisithuba nje seyure ndenze ilizwi eligqibeleleyo endilisebenzisayo ngoku kwisiqendu sam esilandelayo.
Nantsi intro podcast:
Inqaku elisecaleni… isantya soko kubuya besinokubakho ngenxa yokuba ibiyiprojekthi encinci enamagama angaphantsi kwe-100… Ndiyakholelwa ukuba ukhetho lwabo lwesantya lungaphantsi kweeyure ezili-12 kwiiprojekthi ezininzi.
Iqonga likwavumela ukuba wakhe ibhentshi lomsebenzi weetalente zokusebenzisa ilizwi okhe wazisebenzisa ngaphambili kwaye unqwenela ukuzisebenzisa kwakhona… into ebalulekileyo kwiinkampani ezinqwenela ukugcina ukungqinelana kuphawu lwazo lwomsindo!
Iqonga likwabonelela nge API yeenkampani ezinqwenela ukufaka iiprojekthi zelizwi kunye nezomsindo emva kwemveliso kwimveliso okanye kwinkonzo yazo. Kwaye, kwimibutho emikhulu, ungaqhagamshelana neBunnyStudio ngeeprojekthi ezinomthamo omkhulu okanye iinkonzo ezifuna iifomathi ezithile, okanye izinto ezintsonkothileyo ezenziwayo.
Hlela iLizwi lakho ngoku ngoku!
Ukubhengezwa: Ndililungu le BunnyStudio.
tags: odiyoukuhlela audioukuveliswa kwemveliso emva komsindoUkukhutshelwa komsindobunnyathidubbingIlizwi lerailer trailerUmboniso bhanyabhanya wekhompyuter ngelizwiiilwimi ezininzi kwilizwi elingaphezuluInkqubo yeselfowuniIsingeniso sepodcastipodcast ngaphandlePodcastingukuvelisa emvaukubhaliselwatranslationAbadlali belizwiilizwi ngaphayavoicebunnyilizwi ngaphaya